Читать онлайн «AMIN’NY ANDRO» - автор StaVl Zosimov Premudroslovsky - Ridero
Бесплатный фрагмент - AMIN’NY ANDRO
ПриключенияСовременная прозаЮморТриллерЭлектроннаяПечатная А5Русский
RAHA MISY ZAVA-MISY
Taorian’ny nanoratako tamin’ny reniko hoe: “Avia avelao, ry neny a!”, Nandeha tamin’ny lalana nivezivezako ny trano fialan-tsasatra aho ary nieritreritra hoe:
— Inona no mampiavaka ny Rosiana sy ny Amerikanina ary ny Eropeana?
— Ary raha miaina fa mieritreritra lojika, tsy diso isika. — Namaly ny tenako aho ary nandeha. Te hisotro aho — mampatahotra ary manaikitra. Handeha aho, ka handeha amin’ny alàka mankany amin’ny zaridaina misy fefy vy vita amin’ny orinasa indostrialy. Hitako fa efa maizina ny andro. Reko fa amin’ny lafiny iray amin’ny fefy dia misy olona mangina, saingy nanindrona, tsy nahoraka. Toy izany koa aho namaly. Hitako fa misy kitapo ovy iray mandeha avy amin’ny zavatra hafa any amin’ny ilan’ny fefy, nofenoina zavatra koa amiko. Niparitaka aho, ary ny kitapo dia nikasika ny fialan’ny alika tsy fantatra iray, tavela tsy ela teo anoloako. Niakatra tany aminy aho, nandinika azy hafahafa, ary, tsy niahiahy na nieritreritra zavatra hafa, namaha azy, ary tao …, tao?! Teo izy dia feno fonosana, ary nasiany sosotra mifoka. Raha tsy nieritreritra momba na inona na inona aho dia nalaiko ilay izy, nalaiko ilay paoma nataon’i Adama ary natsipiko teo an-tsoroko izany, dia nidina haingana aho tamin’ny hafainganam-pandehan’ny Ferrari nankany amin’ilay tranom-bahoako, ary nandevona ilay saosy tsy hay hadino izany.
Naniry hianatra sy hiaino avy hatrany aho.
Fa inona no nitranga?! Kuzma. Lee: izy dia mpitsikilo, mpanondraka kitapo izy, teratany Syktyvkar ihany koa izy ary tonga tamin’ny namany ary mpiray tsikombakomba aminy: teratany Aldyrbaguy gorge, ilay toeram-pambolena “Omeo aho hohanina”, izay anjara asan’ny fahababoana ary tsy miteny Rosiana.
— Aiza ny kitapo? Nanontany i Kuzya
— Ary natsipinao izy? — Namaly ilay fanontaniana ny mpiara-miasa hebreo.
— Ary ianao nanao koka?
— Ary ianao..??
Avy eo tonga ny ady moana. Fa am-pahatsorana, ny sausage dia mangidy sy masaka…
P.S.: Namidinay ny fianakaviana ilay gorodon’ilay kitapo ary feno rano feno hadalana sy hadalana… Natolotra tamin’ny tsipoapoaka ny fivoriana…
Ny andro hafa, noho ny tsy nitolomany ny fivoriana, dia nentin’izy ireo ho ao amin’ny laharan’ny tafika sovietika aho, izany hoe tao amin’ny tafika. Tao anatin’ny iray volana, dia nanadino izay rehetra nianarako tao amin’ny ivon-toeram-pitsaboana, akanin-jaza, amin’ny ambaratonga ambony ary tao amin’ny sekoly voambolana roa ambanin’ny isa: valo amby sivin-jato amby sivin-jato amby telo amby sivin-jato amby telo amby sivin-jato amby telo amby roapolo sy roanjato amby sivin-jato, izay eo amin’ny ankavanan’ny làlana manomboka amin’ny volombava mankany amin’ny toerana marika, izay misy eo atsimo. metro.
Mitsangana izahay, hany ka saika hiasa eo amin’ny lohan’ny antokon’ny miaramila izahay ary mifoka sigara eny am-baravarana. Avy eo dia nisy ny krizy any amin’ny firenentsika tsy milamina. Mafy ny fotoana, sigara telo fonosana isam-bolana. Ary ny anjarantsika dia eo akaikin’ny fiompiana kolontsaina “Bull udder” ary marina izany. Dia mitsangana ary mifoka izahay, ary mijanona avy ao aorinan’ny hazo ny Baba Yaga. Marina, Jadwiga no anarany. Eny. -, mieritreritra izahay, — akoho kely ary, na eo aza izany dia manonofy momba ireo kirihitra miaraka amin’ny mavitrika izahay. Ary niantsoantso izy, nanelingelina ny fisainantsika. Marenina izy ary jamba.
— Oh, miaramila, mamaly, awww?!
— B, adala, inona no henonao, antitra? Roanjato sy valonjato santimetatra no lavitra anao?! Ao ambadiky ny fefy!!
— Bes! — dia namaly indray ny tompon’andraikitra. — Inona no ilainao, lazao, na mandeha leoty karoty?
— Izaho, hoy ny zoky taloha. — mila manangona entana amidy ianao, — ary mitsiky, — kisoa kely, Borusenka. Napetrako teo ambony latabatra ny moonshine, omeo ahy mihitsy izany.
— Misy anao izao? Nanontany aho, lehilahy iray izay nahita kisoa afa-tsy tany amin’ny zoo, fa noho ny antony iray dia nantsoina hoe hippos izy ireo.
— Dras!! Inona no nitondra anao?? Namerina tamin’ny feo iray aho.
— Homeko anao ny kisoa sasany … — raha tsy henoina na tsy mahazo ny fanontaniako dia hoy ilay taloha.
— Nandeha teny an-dalana izy, nanidina agaric ate.. — Nanoro hevitra aho, teo anoloan’ny mpiara-miasa amiko.
— Ary aiza no misy anao? — nanontany namana
— Ary tonga amin’ny vohitra ianao ary manontany an’i Yadu, moana ny lalantsika.
— Ahoana? Arsenika, sa inona? Nikiakiaka tao an-tsofina aho, toy ny mikrô.
— Tsia, malalako! Hehe.. Anontanio an’i Yad Vigu!!
— Ary rehefa ho avy? — nanontany ny mpiara-dia taminy.
— Ary amin’ny faran’ny herinandro, amin’ny mitataovovonana! Tsy vokaiko fotsiny izy. — Namaly ny renibeny ary nandeha nanangona kirihitra maintso tsara tarehy.
Rehefa vita ny fanontaniako dia nanontany mpiara-miasa iray aho.
— Ry namako, namono ny kisoa va ianao?
— Mazava ho azy. Nipetraka tany amin’ny tanànan’ny toeram-pambolena.
Tonga ny alahady. Nandositra teo amin’ny AWOL izahay tamin’ny farany. Tonga tao an-tanàna izahay nefa tsy nisy olana ary tsy sarotra ho anay ny nahita ny trano fonenany, indrindra satria dimy trano monja no misy ao an-tanàna, ary trano fandraisam-bahiny no misy mpiasan’ny mpiasa. Avia midika azy. Ary izy sy ny mofo, sy ny sira, ary na dia ny Goea aza hita. Nihinana sakafo voajanahary izahay ary nisotro bebe kokoa.
— Tsara, vehivavy antitra? — nanomboka ny namana. — aiza ny kisoa?
— Eny, kisoa izy ary malalany ao amin’ny trano firaketana. Namaly izy ary niditra tao anaty efitrano. Maka fehy antsasaky ny zato metatra izy. Mivelatra izany ary mamoaka sabatra tamin’ny taonjato fahadimy A.K, toa tamin’ny vanim-potoana. Rusty, harafesina ary zatra mifatotra amin’ny kasety elektrika.
— Inty, ry zanako, ity no farany nataoko Joseph, niverina tany amin’ny World War I Grant. Rehefa tao amin’ny orinasa mpanao hena dia nitaona sy nanapaka ny rehetra izy: na omby sy akoho aza.
Tsy nahatsiaro tena aho raha nijery an’i Stakhanovsky, nijery mangarahara. Nisy namana iray naka ny antsy teny an-tanan’ny tompovavy…
— Avia, lazao amiko. — Taiza no nivoahany, A?
Natodiny ho any an-tsompitra izahay.
— Misy, — hoy izy, — Borusenka malalako.
Amim-pahatsorana, mijery an’io Borusenka io aho ary ny masoko dia ao ambadiky ny sofiko.
Potika ny làlany avy teo amin’ireo zana-tsipika misy slits roa tamin’ny telo. Ary avy any amin’ny crevice slots ny vala sy ny tsorakazo mihantona amin’ny elastic. Toa izany dia ilay piglet Boryushishche antsasaky ny fiainana ary tsy mandainga.
— Ry malalako, hankao amin’ny trano banga aho — nenibe nitomany, mandrakotra ny vavany tsy misy fehiny amin’ny sisin’ny bandy. — Ary arahi-maso bebe kokoa ny boryusenka. Izaho irery no avy amin’ny havako. Tsy misy olon-kafa, izaho mikarakara azy hatrany am-bohoka. Veloma, omby andiako. Yyyyyyy!! — nitomany ilay vehivavy taloha ary tsy nitsahatra ny fitomaniana tao anaty iray nianjera, nanova ny feony tsy nilentika intsony. — Ary aza adino, lads, amidy ho…
— Hiantsoantso daholo ny zava-drehetra!!! — Nampahery ny mpiara-miasa ary nitodika tamiko. — Ary ianao, sakaiza, ampio aho, sokafy ny vavahady.
Nanatona aho tamim-pahatokiana ka namadika ny valalambo, nihalehibe ny vavahady ary tsy nampihetsika ny sofiny akory ny kisoa. Kicks baoty. Eny ary, tsy nifangaro tampoka ny namako ary niaraka tamin’ny heriny rehetra, ny fomba nandroany kisoa iray teo amin’ny nickela, ny antsasaky ny antsasaky ny feony. Nikelikely, ny haben’ny takelaka. Rehefa afaka segondra vitsy, dia nanokatra ny masony havanana ny kisoa, ary avy eo dia niankavia. Avy eo nisy gadra iray narahina, ary nisy “mammoth” antsoina hoe: Fighting nitsambikina tamin’ny volon-tongony mivoaka teo amin’ny kibony, tsy hita akory ny tongony.
Mikoropaka amin’ny masony roa amin’ny lelan-tsabatra, avy eo manitsy ny mpianatra blond manga amin’ny lalana samy hafa, ny kisoa kosa nanodinoka ny mason’ilay namany. Rehefa avy nanopy ny masony indray teo an-tratry ny sabatra izy dia namindra azy tamin’ny tsato-bato: ambony, midina; miakatra, midina, mizaha maso ny mpiray tampo amin’ny andiany iray ary tafalentika lavitra be, hany ka ny làlambato rehetra dia nivadika ho sakamalaho marobe. Ny zezika vao nafafy avy teo ambanin’ny tongony ary nandrakotra rindran-akoho roa, nandondona azy ireo ny akoho, izay nahagaga ny zava-nitranga. Ny mpanao namana dia efa nirohotra nankamin’ny zaridaina, tamin’ny alàlan’ny tokontany ara-toekarena. Ny kisoa mampinono izay iadinako, noentina haingana tamin’ilay meloka, nampiely ny zava-miaina rehetra izay manana fahazoan-dàlana ao amin’ity tokotany ity. Nibolisatra teo amin’ny varavarankely i Bebe, nandrombona ny oron-trany. Nitsambikina teny an-dàlana aho, solika fotsiny.
Rehefa tafavoaka ny tokotaniny, dia nisy andiany iray, niasa tao amin’ny zigzag, nanomboka nandresy ny fambolena zaridaina, nikapoka ny trano maitso ary nirehitra, ary ny kisoa mampinono, Borusya dia nitady hitady azy eo am-balahany, ny sakany ihany no vita tamin’ny sabatra kely tamin’ny taonjato fahavalo ambin’ny folo. fifangaroana. Fohy ny elanelana ary efa nifamonjy fanampiana ny mpiara-dia ary nifandona mafy fotsiny, nanampy azy handentana sy handositra, izay nasehon’ny vahoaka Asiatika-Gypsies sy mpijery teo akaikin’ireo mpifanolobodirindrina-monina manodidina azy. Nisintona ny zaza teo ivelan’ny fefy ny reny Tajik sy gypsy, saingy tsy nahatafintohina izy ireo, te-hijery hijery mpitsangatsangana velona antsoina hoe: “valifaty sy famonoana ilay boriborin-kisoa Borusi noho ny mpiady tafika rosianina.” Ary mampalahelo izany raha tsy ho an’ny valan-javaboary any amin’ny faran’ny zaridaina, fa ao anatiny kosa dia misy fantsom-borona mifono vy izay itenenan’ireo mponin’ny tanàna rosiana azy. Nentin’izy ireo, tsy fahitana, mpiady mpiara-miasa izy ireo ary tao anatin’ny fotoana fohy dia nitranga avokoa ny zava-drehetra na ny mifanohitra amin’izany: nihazakazaka ny biby miompy kisoa, ary nisy mpiafika iray nanipy ny sisiny maintso, araka ny tahony, ary raha izany dia haingana sy tamim-pitiavana, toy ny hoe nanao fanadinana am-pahefana izy ireo., tsy mitazona forks, fa basy Kalashnikov manafika, miaraka amin’ny antsy bayonet. Ary na ny mpihaino aza dia nanohana ilay mpiady tamin’ny tehaka, nidera sy nidera ny fandresena homo sapiens, ny tafika Rosiana tsotra — noho ny saina, ny fisainana ao an-tsaina, ary vokatr’izany dia tsy nahatanty ilay fanafihana ny amboakely ary nianjera teo am-baravarana, teo am-baravarana izay nisy gony mitazona fehin-kofehy amin’ny tanana iray ary manipy faharoa ao ambadiky ny lamosiny ambany, renibeny tezitra an’i Yad-Vig. Nataon’ny mpiara-monina taminy ny lasantsy farany tamin’ny fatin-kisoa sy ny fitofom-biby, nanindrona ny vatan’ny biby tsy nisy aina.
— Tsara, renibeny, Spartak niara-nanomboka tamin’ny herim-po. — vita, aidino ary apetraho ny latabatra!!!
Nisintona antsy fihodinana avy ao aoriany i Dadabe, izay nanodin-koba ho an’ny dumplings sy pizza, ary ny tsihy no namatotra azy teo am-boandoha. Nisy lelavola nanindrona, ary zara raha nandositra azy izahay roalahy. Mitrandraka koa izy, folo ka hatramin’ny dimy kilaograma. Ary ny mpijery rehetra dia niampita azy ary niainga mba hijerena anay fa tsy tratra, fa ny lamosin’ny vato dia naratra ihany. I Bebe Yad-Vig, ary avy eo dia nanoratra fitarainana tany amin’ny kaomandin’ny regiment, izay nomen’izy ireo folo andro ary niara-dia taminy — izy ireo dia nanao bataly fady izy ireo nandritra ny roa taona, ary avy eo izy dia nanomboka tamin’ny lakolosom-baravarankely, nanadio ny fofom-bava tao amin’ny pigsty teo an-toerana, tamin’ny fomba manual…
Toy ny izao: ao ambadiky ny tobin’ny metro an’ny lehiben’ny komandy lehibe, Saint sy just Sasha, ao amin’ny faritry ny peni mirefy manimba, misy trano fidiovana bio misy trano rihana telo mifandray amin’ny rojo iray, noteren’ny tanjona iray, ny roa tamin’izy ireo dia nanasa trano fandroahana miasa, izay misy ny mponin’i St. Petersburg, ary ny fahatelo dia ny biraon’ny mpandraharaha sy ny mpanora-dalàna, tao amin’ny olona iray izay nanangona vola ho an’ny serivisy amin’ny fanolorana tahiry.
Nitsangana ny olona ary nihazakazaka niandry ny toerana rehetra niandohany. Ary teo anelanelan’ny mpitsidika dia nividy vola aho, ary namidiko ny volany ho sakaizany matavy, izay mipetraka eo amin’ny toeran’ny mpandraharaha sy mpiantsena amin’ireto trano fidiovana ireto, i Claudia Filippovna Undershram, ilay leningrad, leningrad amin’ny taranaka fahadimy. Tsy resy teo izy avy hatrany tamin’ny fandresen-dahatra nanao heloka bevava lehibe nataoko, tiako ho tsikariko fa tsy nanonona ny tenako tamin’ny faharatsiana aho avy eo, ary niresaka taminy aho. Saingy teo amin’ny endriny ny vokatra. Roa mitombo ny tarehy. Tamin’ny fomba, hariva, amin’ny hariva. Ary efa mihena ny habetsahan’ny vahoaka. Izaho dia tsy nieritreritra momba ny fitomboan’ny vatan’ny nenitoako, nanapa-kevitra ny hanipy fomba kely. Ambonin’izany, nanana hery fiarovana aho. Ary rehefa niditra tao amin’ny biosort malalaka aho, nahatsapa ho mitovy amin’i Nenitoa. Ny sakafo mihinana no nametraka ahy tao amin’ny trano fidiovana. Taorian’izay dia nanjary tsy narary aho, avy eo ny resaka nifanaovana tamina vazaha dia nisy, ny fitrandrahana sisa tavela amin’ny lelan-tsavony amin’ny rindrina, tamin’ny alàlako sy ny torimasiko, nofy mamy tsy misy nofy. Tamin’io fotoana io dia nifoha tamin’ny fisotroan-toaka i Claudia Filippovna Undershram, nanambara tamina vava maina sy ny tenda, izany hoe, mangetaheta, nandatsaka zavatra kely ary, nirohondrohona sy natahotra ny fahamaizinana, ho antony mahatonga ny tara tara. Nitsangana tampoka izy ary nanidy, niaraka tamin’ny lakam-baravarana, ny trano fidiovana maina rehetra ary izaho natory tao anatiny, anisan’izany ny nandositra…
Avy eo, nisy alina feno sakamalaham-bozaka sy manampahefana samy hafa fiaina izay tsy nahatratra ny lalambe, natory tamin’ny dapa. Ny fandinihana ny fahitsiana dia mpiasan’ny lalàna telo manao fanamiana, amin’ny fiara amina orinasa, ny marika Zhiguli miaraka amin’ny isa manga ary misy soratra hita eo amin’ny sisin’ny MILITION, ny polisy dia tsy mbola noforonina tany Rosia, dia nanenjika izy ireo mba hijery ny lafiny maizina. Rehefa avy nanamarina fa mifanaraka amin’ny lalàna ny zava-drehetra ary tsy misy olona afaka maka vola an-trano, nametraka ny fiaran’izy ireo mifanakaiky, manodidina ny trano fonenana, izay ahitàna ny biosorti… Roa miaraka amin’ny basy milina, kibay, solo-borona, baoty sy kapa no nivoaka ary nitsoaka mankany amin’ny kianjan’ireo mpivarotra asia “shawarma”, tarihan’ny olom-pirenena Rosiana, manana zom-pirenena marainan’i Maraoka, izay tsy mahalala akory ny ankamaroan’ny Rosiana, fa olompirenena, ary izy io dia ao amin’ny kiosk miaraka amin’ilay soratra hoe “GAY SHAURMA MANAO PUTIN SY TRUMP”. Ny antony nahatonga izany anarana izany angamba, dia mety nihomehy ireo mpandika teny. Ilay mpamily nitondra basy, nijanona tao anaty fiara tao anatin’ny fiarovan-doha ary tampoka?!
Izaho, izay tsy mpanara-dalàna lalàna ao amin’ny Federasiona Rosiana, dia Rosiana mizaka ny zom-pirenena. Tonga tany USSR, ny Repoblika Kazakhstan, izay nandraisan’izy ireo ahy tamin’ny fahazazako satria Rosiana aho. Na izany aza, rehefa nihalehibe aho dia efa nandresy azy ireo aho. Fa hafa kosa ny tantara, ary miverina amin’ny alàlan’ny tetika: Izaho, tsy olom-pirenena tsy mpita lalàna ao amin’ny Federasiona Rosiana, avy amin’ny zom-pirenena — Rosiana, gadra mendri-kaja, FSB lehibe, fisotroan-dronono, olona sembana ary ireo rehetra ireo miaraka amin’izany, indrindra indrindra satria efa nahalala izany rehetra izany aho tamin’ny tsy misy, na koa izay tsy mbola nandehanany dia nifoha tampoka izy avy teo amin’ny fandrika mikiaka avy amin’ny trano fonenana mifanila, ary mba ho marina kokoa, tsapako ny trano mihidy, alina, efamira, ary ny valindrihana etsy ambony. Nahatsapa ny zava-drehetra aho ary tsy nahatadidy na tsy azoko hoe aiza ny misy ahy?! Notapahan’ny rindrina ny saiko tahaka izany. Nanapa-kevitra ny handeha eny amin’ny “sehatra mini” aho, izay nipetraka teo aho, ary nilatsaka tao an-davaka ny tongotro, ary tao daholo ny zava-drehetra. Nikiakiaka sy nifoha aho, niaraka tamin-jaza, nanonofinofy ny zanakavavin’ny jeneraly, sergeant mpiara-miasa sy mpamily sambany. Natahotra sady natahotra mihitsy aza izy, toa ny Gipsi raikitra, nanorotoro ny tratrany, fa tonga dia nankasitraka ny zava-nisy izy, nefa tsy nino ny matoatoa. Izaho dia tsy nanam-pahalalana, nanozona fanampiana, nanandrana nanisy lavaka kely tao amin’ny manodidina ny rindrina iray, fa tsy nahasoa ny asako, ary tsy nijanona ny fandrika.
Tamin’izany fotoana izany, teo am-pitan’ny trano fidiovana, mpamily mpitaingin-tsoavaly iray hafa, ilay sarimihetsika dia efa niantso ho fanamafisana, ary roa, tsy nanantena ny sakafo Arabo amin’ny koba sy ny akoho, ny saka ary ny alika tsy novidina, dia efa nandositra nankany amin’ny mpiara-miasa sy mpiara-miasa aminy.
Nandre feo teny amin’ny ilan’ny trano rantsan-kazo aho, saingy tsy nampihena ny aretin’andoha lava izany.
— Iza avy? — ny iray tamin’izy ireo nanontany.
— Inty aho, ary iza ianao? Nanontany aho.
— Izaho? fantatrao izao…
— Ravao ny lapa!! — nanontany ny iray aho ary tsy sarotra ny nanao an’io tamin’ny baraky ny milina mandeha ho azy. Nisokatra ny varavarana. Teo anoloako dia nijoro zaza tsy ampy taona telo talanjona, iray, teo am-pandehanana, niampita-tanana, nanao fanamiana mitovy amin’ilay ilay mpanao cop. Nentin’izy ireo tany amin’ny paositry ny polisy akaiky indrindra aho, ary tsy nihemotra mihitsy ny fandrobiana fidiovana.
Niandry ela ny mpiambina hoe ahoana ny fomba ilazana ny antony mahatonga ny fihazonana am-perinasa ao anaty tatitra. Ary voalaza toy izao manaraka izao:
“… Voatana ao, raha manandrana handroba ny atiny amin’ny trano fidiovana bio avy ao anaty, manafina ny fahamarinana amin’ny fako, avy any ivelany.”
Nahafinaritra ny rehetra, indrindra fa ny mpigadra teo aloha, izay voatery nanadio birao, dia niezaka ny nandositra ary nifanitsaka teo anelanelan’ny fikandrana valopy jambany sy ny taolan-tehezana taolana tamin’ny taonjato fahavalo ambin’ny folo. Ny mpamono afo dia nantsoina kokoa, mpiady nitono afo, ary mpamono afo no mpamono azy ireo. Mampalahelo fa tsy mbola noforonina ny minisiteran’ny “emergency” Ireo nanontany azy:
— Inona no mipetaka aminao?
— Pubika sy atody!! Namaly tamin’ny ranomasony izy. Voavonjy ihany koa izy ary nalefa nanadio ny trano ivelany, izay tsy misy varavarankely. Mifanohitra amin’izany, niditra tamin’ny fandavana aho, nilaza fa hanajanoko ny fiainako raha manohy manitsakitsaka ny zon’ny lalàm-panorenana aho ary manery ahy handio ny hadalany any an-trano. Nesoin’izy ireo ny Lalàm-panorenana ary nosoloiny ny saziko tamin’ny daroka ahy tamin’ny voa, ary nanomboka nandoha tamin’ny alina aho, nanomboka tamin’ny ra sy ny soda. Fa ny kabine tsy nanasa!! Ary izaho, tao anatin’ny adiny iray, dia niasa ny haben’ny alina Nevsky Prospect, hitady ny fiainana…
Ny fahatongavan-tena nitondra ahy vetivety tany an-tanàna ho mahery fo. St. Petersburg, tao amin’ny trano fandraisam-bahiny mpanao asa soa, dia niantso tsotra izao tamin’ny vahoaka ho olona tsy manan-kialofana. Nomen’izy ireo ahy ny shkonar, izany hoe fandriana iray, izay nokapohiko nandritra ny antsasaky ny iray volana avy amin’ireo manam-pahefana teo an-toerana, nametraka dimy ambin’ny folo tany amin’ny hopitaly talohan’ny nandaozako ahy. Toeram-piaramanidina no nisy ny piadiana. Nanangona sivy tamin’izy ireo aho. Napetrako teo an-tampon’ilay iray izy ireo ary natory teo am-baravarana. Nisy fanelingelenana sasany: fisolokiana tena saro-pantarina, ary niankina tamin’ny tohatra hazo aho. Niavaka ny fiainana: maraina — hariva, sakafo antoandro — trano fidiovana, sy ny sisa. Nandoa vola ahy sy ny mpiara-miasa amiko Lyokha Lysy, izay nahavita fampianarana ambony roa tany amin’ny faritra nandritra ny dimy ambin’ny folo taona izy ireo, ho an’ny fanjakana tony amin’ny rihana faharoa. Tsy nitovy fijery izy ary manana ny valo ambiny valo mena amin’ny teniny. Ary satria sarotra ny nahazo solomaso niaraka tamin’ny eyepieces toy izany, dia niforitra avy tao izy, nampidirina bà telo misy solomaso ary nampifandraisany azy tamin’ny varahina varahina. Nahita fahitana zato isanisany izy. Ary nanomboka nanome voninahitra azy aho tamin’ny vazivazy valo. Niara-niaina taminy niaraka tamin’ny fianakaviana iray izahay, toy ny ao amin’ny faritra fohy, dia manana faka sy mizara mofo izahay amin’ny famonoana, na izany aza, noho ny antony iray dia nomeny anjara lehibe kokoa aho, na nanaja ahy na namahan-tena ahy tamin’ny fotoana nanaovana fahirano mba hanitarana ny fiainako amin’ny fidiran’ny tsindrona. ny nofoko. Isa-maraina aho, nifoha, dia nahita teo am-pisakafoanana nandritra ny tontolo andro na mihoatra. Ny antitra sy ny mponina amin’ny vanim-potoana hafa, samy mipetraka amin’ny toerana tsy dia lavitra ary tsy dia fohy: ny kely indrindra teo amin’ny dimy ambin’ny folo taona, niara-niasa tamin-tsitrapo ny fombany, nahazo tamin’ny fomba isan-karazany ny fangalarana kely sy fampanaovana fizarana manankarena kokoa amin’ny mponina, ilay antsoina hoe tokantrano. Manohitra foana ary miverina amin’ny fiverenana aho, ka nandoa vola ry zareo rehefa natory. Ny sambokely kosa faly teo am-panaovana izany ary nanomboka nihinana tavy.
Indray maraina mangatsiaka aho dia nifoha. Nianjera teny ivelan’ny varavarankely i Snow. Ny mitsangana toy ny hakamoana, ary tsy nisy ny planina hividy vola, indrindra hatramin’ny omaly, ary nijanona ny lohako. Ilay lehilahy sola, toy ny mahazatra, mamaky zavatra ao an-tsainy, tsy mihetsika afa-tsy amin’ny molony ambany. Ary dia mbola nitohy izany rehetra izany, raha tsy noho ny fisehoan’ny cormorant-recidivist taloha fito-polo taona, tantsambo filomanosana lavitra, pensioner ary ny Methius tsy manan-kialofana amin’ny fakla Finnish. Te-hahatsikaritra aho fa ny olona voampanga matetika dia mifandray amin’ny castes, toy ity tranga ity. Ary tamin’ny Kaokaziana no noresahany kokoa noho ny accent finnish.
— Eny, ry parasita, efa mandatsa-dranomaso isika? nanomboka tamin’ny soroka izy. Nivadika aho, avelan’i Bald handao ny boky. Minitra iray no lasa.
— Inona no ilainao antitra? — nanontany an’i Bald ary nandevina ny tenany tamin’ny sariitatra iray.
— Mitsahara mijery ny dossier, raiso ny volamena, izany hoe izaho dia mandehana. Nandritra ny efa-taona aho dia nahazo pension.
Taorian’ny teniny dia sahabo roa minitra teo ho eo ary nisy ranomandry vao nirotsaka tao ambaninay. Lavitra teny lavidavitra dia nisy fivarotana misy karazan-tsasary matevina sasany. Niditra tao izahay ary nandidy roanjato. Ao amin’ny fomba fandroana sy ny mofomamy Methodius:
— Tsy mipetraka ny mpivady raha tsy misy mpivady! — nandidy zato hafa izahay. Manaraka, aorian’ny mofo misy:
— Andriamanitra tia ny Andriamanitra telo izay iray! — Nampidininay ireo solomaso ireo. Avy eo dia niresaka tamim-pahanginana izahay, samy niaraka tamin’ny tenany manokana ary i Methodius irery dia tsy nangina ary nilaza tamin’ny tenany ny fomba nahazoana ny teny voalohany tamin’ny dimy misy. Tsy mpihaino maimaimpoana izahay.
— Tonga niaraka tamin’i Kyuubi ny sambontsika. Nankany an-tananan’ny rahalahiko aho. Nisotro nandritra ny herinandro izahay. Ka ny ampitso maraina dia nivory tao amin’ny tompon-trano izahay, taorian’ilay akora nentina ary nandalo ny trano nisy ilay fampakaram-bady. Niarahaba azy ireo aho, ary nandefa ahy taratasy telo izy ireo… Nijery manodidina aho ka nahita antontam-biriky teo aoriako, raha nandeha nitady moonshine sy ny famaky ny rahalahiko, nalaiko daholo ny vato rehetra, tao anaty trano, nisy ratra, eny, ny ampakarina dia teo an-handriny. Taorian’izay dia nanomboka nandady ny varavarankely izy. Tsy manam-potoana hifarana ny kilaoty rehefa efa nigadra nandritra ny telo taona aho. Inona koa no hosotroinao? — nahavita izy ary nandeha nitory amin’ny entana amidy amin’ny mpanjifa.
Misotro be izahay ary nandritra ny fotoana maharitra, na dia snacks aza. Ny hariva dia rava ny tafo Lysy ary nanomboka nihazakazaka ho any amin’ny hafa izy. Nijery ity lesona bespontovoe ity aho ary nitondra ny sidekick mamo teo amin’ilay trano banga. Ary i Methodius tamin’izany fotoana izany, rehefa nahazo an’i Lysy, tsy nahy, teo ambanin’ny masony, dia nikasa teo ambony latabatra, nijanona teo amin’ny tany.
Nifoha maraina aho dia nifoha tamin’ny feo malemilemy sy korontana iray atao hoe Bald. Hita fa rehefa natory izy dia nisy Methodius tezitra nanidina tao anaty efitrano misy ratram-paty ary namely an’i Lyokha natory teo amin’ny handriny mivantana teo amin’ny handriny. Nitsangana teo am-pandriana izy ary niankohoka tamin’ny gorodona, nitsangana tamin’ny tsihy ary nanindrona ilay antitra. Avy eo dia tsaroako ny fandriana, nisy ny ady, mandra-pahatongan’izy ireo nisaraka. Tsiahivina fa rehefa nihataka an’i Lysy tamin’ny tavern aho, dia nanjary tsy nahatsiaro tena i Methodius mamo. Noroahina avy eo amin’ny lafiny ara-kolotsaina teny an-dalana izy talohan’ny nanakatonana azy, ary niondrika tao an-trano izy, niantehitra tamin’ny foto-keviny.
— Notsipinao aho, Bald!! — Notsongaina toy ny gropy ary tsy nitsahatra nandona sy maty, raibe, efa nandry teo amin’ny tany, ny lamosiny.
— Ahoana? — nanontany, nibosesika ny tendan ‘i Methius ary nipetraka tahaka ny kisoa, Bald sy ny taolany.
Amin’izany fotoana izany, ny cormorant taloha, miezaka ny milomano avy ao ambanin’ny cormorant antitra antonony, nanala ny sofiny ankavia ary nanapatsapa plum avy amin’ny orony. Namaly ilay lehilahy botry nefa tsy namoaka ny tanany, sady nitora-doha azy.
— Tsara, tsara fanahy. — Niezaka nanamaivana ny teratany tanora aho, hoy aho. — Eh ry vahoaka tsy manan-kialofana, manary azy eo am-pandriana. Lazao ahy, Metosé, inona no nanomboka nisora-bazana?
— Izaho!! — tsy mamela ny handehanan ‘i Bald, nanomboka nanamarina ihany ny raibe. — Matory aho, tsara fanahy, tsapako fa misy olona mamontsina, mampahiratra ny masoko — oram-panala. Nifindra aho ary nanomboka nifoha. Mihodina aho, ary eo alohako dia misy nenitoa sy hazo lava, folo santimetatra miala amiko. Mangatsiaka tsara ny alina, miaraka amin’ny hanantonana ary koa ny an’i Lysy, ny omby, dia nanipy azy, ah!! Yay!! Yay!! — intelo no niantso an’i Metôiusius.
— Yep!! Yep!! Yep!! — intelo izy no nikapoka azy i Lysy.
Taorian’ny antsasakadiny dia efa nanome baoritra roanjato mahery izahay ary handeha hanamarina ny tsy fahazoana antoka anay. Ary tsy nahafa-paharemaso i Methodius. Ny tsara dia carte de banke. Ara-toekarena…
— Izany dia, tao anatin’ireo dia tsy nisy fotoana ara-dalàna, raha lehilahy ny tundra. Atsangano ny sandrin ‘ny tundra-man, antsasaky ny andro, ahena ny hatry ny lehilahy tundra-man, antsasaky ny alina. Ary ny gisa dia niaina teo. Ary raha mijery akaiky ny fahitana zato isan-jato dia tsy ny kintana akory izany fa ny mammoths, ny bera poleta, ny diera amin’ny farany ary ny kisoa. Ary samy nantsoin’ny olona hoe Chukchi — olona, satria izy ireo ihany no karazan-jaza izay miaina ao amin’ny tundra. Indray mandeha dia misy lehilahy tundra mandeha miaraka amin’ny satroka iray atsangana ary mikapoka azy, fa ny Chukchi ao amin’ny yaranga dia velona amin’ny tafiotra mahatsiravina. Nitsahatra tsy nanakombona ilay tara-pahazavana ny tadio ary nilatsaka ilay tafiotra. Ary ny Chukchi nandao ny tranon’izy ireo tao amin’ny tononkira ary avy hatrany dia nisaotra azy noho ny oram-panala fotsy madio miaraka amin’ny urine mavo. Ary ny tundra dia lasa toy ny tsy fahampian’ny vitamina eo amin’ny vatana, toy ny fivadiany amin’ny vatana. Ary dia niseho avokoa izany rehetra izany ary nanomboka nandihy ny rehetra, fa ny mangatsiaka kosa dia nanomboka nanjavona ny icoson mavo, nisy olona nangalatra azy ireo ary namela lavaka. Ary avy eo, i Serezha, tsy manan-kialofana any an-toerana, izay nantsoin’ny rehetra hoe “ranomandry mavo”, dia nanohy ny tantarany, ny lehilahy tundra dia nandidy azy hitady mpangalatra ary handroaka azy. Ny Chukchi rehetra dia nandevina tao anaty lakam-panala ary nisy, niandry izy ireo ary gaga. Hita fa lasa mpangalatra ny zanany, izay nandinika ireo icikôda ireo ho an’ny oz; Ary satria teraka ny zaza dia hoy izy ireo taminy:
— Aza mihinana, misesisesy, ranomandry mavo!! — ary nikapoka azy, nikapoka azy teo aloha, indrindra teo amin’ny loha.
Amin’ny ankapobeny, Serezha-Yellow Snow dia tanora, fito-polo amby roapolo taona, ny ambiny dia toa an’ny Chukchi ihany. Nankany amin’ny Central Library izy ary nanangona tavoahangy teny an-dalana. Indray mandeha izy nanomboka nanjavona nandritra ny andro maromaro. Tsy mitovy ny olona rehetra saingy samy liana. Rehefa niseho izy dia nanontany. Nangina izy. Saingy rehefa mamo izy, dia nanaiky i Serezha Yellow Snow fa hanambady tsy ho ela izy.
— Ary iza? — ary arahan’ny fanontaniana iray.